FILE - In this Jan. 31, 2010, photo, an unmanned U.S. Predator drone flies over Kandahar Air Field, southern Afghanistan, onamoonlit night.
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံထဲက IS အစွန်းရောက်အုပ်စုတခုကို ပစ်မှတ်ထားပြီး အမေရိကန်စစ်တပ်က အဝေးထိန်းဒရုန်းယာဉ်နဲ့ တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့် အာဖဂန်-ကာဘူးလ်လေဆိပ်တိုက်ခိုက်မှုကို စီစဉ်ခဲ့သူလို့ ယုံကြည်ရတဲ့ လူတယောက် သေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
ကြာသတေးနေ့က ကာဘူးလ်လေဆိပ် ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုမှာ သူ ပါဝင်ပတ်သက်မှု ရှိသလားဆိုတာကတော့ ချက်ချင်းမသိရသေးပါဘူး။ လေဆိပ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီး ၄၈ နာရီအတွင်းမှာပဲ အမေရိကန်စစ်တပ်က အဝေးထိန်း ဒရုန်းယာဉ်နဲ့ လေကြောင်းကနေ တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လုံခြုံရေးခြိမ်းခြောက်မှုတွေ ရှိနေတဲ့အတွက် လေဆိပ်ဝင်ပေါက် ၄ ခုအနီးရောက်နေတဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေ အဲဒီနေရာက ချက်ချင်းထွက်ခွာသွားကြဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာတင်ထားတဲ့ အမေရိကန်သံရုံးရဲ့  ကြေငြာချက်မှာ တိုက်တွန်းထားပါတယ်။
ဒီအခြေအနေမှာ အမေရိကန်ပြည်ဝင်ခွင့် အထူးဗီဇာရထားသူတွေကို ခေါ်ထုတ်နိုင်ဖို့ ခက်ခဲနေပေမယ့် အမေရိကန်မှာ အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ရထားသူတွေနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေအပါအဝင် သံရုံးဝန်ထမ်းတွေကို ကယ်ထုတ်ဖို့ ဆက်ပြီးကြိုးစားနေပါတယ်လို့လည်း နိုင်ငံခြားရေးဌာန အရာရှိတယောက်က ကာဘူလ်းမြို့ Hamid Karzai နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကနေ ဗွီအိုအေကို ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကြာသတေးနေ့က အသေခံဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုဟာ ကနဦးယုံကြည်ထားသလို ဗုံးနှစ်လုံးကွဲတာမဟုတ်ဘဲ လူတယောက်တည်းကပဲ ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်း အမေရိကန်စစ်တပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Hank Taylor က သောကြာနေ့မှာပြောပါတယ်။
အာဖဂနျလဆေိပျ အသခေံဗုံးခှဲမှုစီစဉျသူ ကနျစဈတပျ ဒရုံးယာဉျသုံး သုတျသငျ
အာဖဂနျနစ်စတနျနိုငျငံထဲက IS အစှနျးရောကျအုပျစုတခုကို ပဈမှတျထားပွီး အမရေိကနျစဈတပျက အဝေးထိနျးဒရုနျးယာဉျနဲ့ တိုကျခိုကျခဲ့တာကွောငျ့ အာဖဂနျ-ကာဘူးလျလဆေိပျတိုကျခိုကျမှုကို စီစဉျခဲ့သူလို့ ယုံကွညျရတဲ့ လူတယောကျ သဆေုံးခဲ့ပါတယျ။
ကွာသတေးနကေ့ ကာဘူးလျလဆေိပျ ဗုံးခှဲတိုကျခိုကျမှုမှာ သူ ပါဝငျပတျသကျမှု ရှိသလားဆိုတာကတော့ ခကျြခငျြးမသိရသေးပါဘူး။ လဆေိပျတိုကျခိုကျမှုဖွဈပွီး ၄၈ နာရီအတှငျးမှာပဲ အမရေိကနျစဈတပျက အဝေးထိနျး ဒရုနျးယာဉျနဲ့ လကွေောငျးကနေ တိုကျခိုကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
လုံခွုံရေးခွိမျးခွောကျမှုတှေ ရှိနတေဲ့အတှကျ လဆေိပျဝငျပေါကျ ၄ ခုအနီးရောကျနတေဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံသားတှေ အဲဒီနရောက ခကျြခငျြးထှကျခှာသှားကွဖို့ အမရေိကနျနိုငျငံခွားရေးဌာန အငျတာနကျစာမကျြနှာမှာတငျထားတဲ့ အမရေိကနျသံရုံးရဲ့ ကွငွောခကျြမှာ တိုကျတှနျးထားပါတယျ။
ဒီအခွအေနမှော အမရေိကနျပွညျဝငျခှငျ့ အထူးဗီဇာရထားသူတှကေို ချေါထုတျနိုငျဖို့ ခကျခဲနပေမေယျ့ အမရေိကနျမှာ အမွဲတမျးနထေိုငျခှငျ့ရထားသူတှနေဲ့ အမရေိကနျနိုငျငံသားတှအေပါအဝငျ သံရုံးဝနျထမျးတှကေို ကယျထုတျဖို့ ဆကျပွီးကွိုးစားနပေါတယျလို့လညျး နိုငျငံခွားရေးဌာန အရာရှိတယောကျက ကာဘူလျးမွို့ Hamid Karzai နိုငျငံတကာလဆေိပျကနေ ဗှီအိုအကေို ပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။
ကွာသတေးနကေ့ အသခေံဗုံးခှဲတိုကျခိုကျမှုဟာ ကနဦးယုံကွညျထားသလို ဗုံးနှဈလုံးကှဲတာမဟုတျဘဲ လူတယောကျတညျးကပဲ ဗုံးခှဲ တိုကျခိုကျခဲ့တာဖွဈတယျလို့လညျး အမရေိကနျစဈတပျဗိုလျခြုပျကွီး Hank Taylor က သောကွာနမှေ့ာပွောပါတယျ။
#Afghanistan #ISIS #Kabul #voaburmese #အာဖဂနျနစ်စတနျ #ကာဘူးလျ #ဗှီအိုအမွေနျမာပိုငျး